U-Suliman ubheke izinkomba ezisetshenziswayo ukulandelela ukubheduka kweCOVID-19 nokuqonda isimo salolu bhubhane eNingizimu Afrika. Kwezinye zalezi zinkomba kukhona ezingezansi:
• Isibalo sabantu abathelelekayo
• Ukuhlola nezinga lokutholakala kwabathelelekile
• Ukulandelela abantu abangeniswa ezibhedlela nabalaliswe khona
• Ukusabalala kwegciwane
U-Suliman, oneziqu zobudokotela kwi-Applied Mathematics zaseNyuvesi yaseCambridge eNgilandi, ugcizelele ukubaluleka kokunaka izinto ezinganqanda amandla ezinkomba, wathi kumqoka ukubuka ‘izinkomba ezivamile, kunokubuka imininingwane yomuntu oyedwa’.
Uthe ngenxa yezinga eliphansi lokuhlolwa ngezimpelasonto nangamaholidi, kusetshenziswa ulwazi oluhlanganisa izinsuku eziyisikhombisa ‘ukuhluza ulwazi nokuqagula umthelela wezimpelasonto.’ Ubalule ukuthi izibhelu zodlame zakwaKwaZulu-Natali naseGauteng zizoba nomphumela olwazini oluqoqwayo kulezizifundazwe.
‘Okwamanje izinkomba zithi bangaphezulu kwezi-11 500 abantu abathelelekayo ngosuku ezweni lonke. Lezi zibalo zehle ngamaphesenti ayi-11, uma kuqhathaniswa isonto nesonto. Kuyethembisa ukuthi njengezwe sesidlulile esicongweni sefu lesithathu lokubheduka kwaleli gciwane, ngenxa yokwehla kwezibalo emasontweni ambalwa edlule. Lokhu kufakazelwa nawukwehla kwezibalo eGauteng.’
Uxwayise ngokuthi baningi abantu abanalaleligciwane kodwa okungaziwa ukuthi banalo, ngaleyo ndlela izibalo zangempela eNingizimu Africa zingaphindwa kashumi kunalezi ezibikwayo ngoba ‘abantu abayi ukuyohlolwa kanti abanye abakhombisi izimpawu zokuthi bathelelekile’.
Mayelana nokusabalala kwaleligciwane, u-Suliman uthe: ‘Siyazi ukuthi leli gciwane lihamba ngendlela abantu abaziphatha ngayo nangokuhlangana kwabo, ngakho kuyinkomba ebonakalayo ekwandeni kwezibalo zabasulelekayo.’
UDkt Richard Lessells, ungoti ngezifo ezithelelanayo e-UKZN Research Innovation & Sequencing Platform (KRISP), uphendule imibuzo yezethameli, obekukhona kuyona ubumqoka bokuqoqa imininingwane ngegciwane lesandulela-ngculazi nengculazi, nesifo sofuba, ngendlela efanayo nokwenziwa ngayo nge-COVID-19.
U-Solwazi Francesco Petruccione, inhloko yeCentre for Quantum Technology e-UKZN, ubonge u-Suliman no-Lessells ngokunikela ngesikhathi sabo ekuseni, wancokola wathi cishe izethameli eziningi zilandela u-Suliman ku-Twitter!
Ungashaya lapha uma ufuna ukubuka le-webinar noma ulandele u-Suliman kuTwitter: @rid1tweets
• Mayelana nesikhulumi: UDkt Ridhwaan Suliman ngumcwaningi omkhulu emkhakheni i-Operational Intelligence Impact Area ngaphansi kwe-NextGen Enterprises and Institutions eCentre for Science and Industrial Research (e-CSIR). Uneziqu zobudokotela kwi-Applied Mathematics zaseNyuvesi yaseCambridge. Unamava nasemkhakheni wezobunjiniyela bamakhemikhali njengoba eneziqu zokuqala, i-Onazi neMastazi. Uke wasebenza emkhakheni wobunjiniyela basemoyeni nezokuvikela. Ucwaningo lwakhe lubandakanya ukusungulwa kwezinhlelo zemishini esebenza ngekhompyutha nokusebenzisa amathuluzi ekhompytutha nefizikisi ukuqonda kabanzi nokuhlela lezi zinhlelo. Ubeyingxenye yethimba elihlaziya ulwazi nge-COVID-19 eNingizimu Afrika, ulwazi olusetshenziswa ekuthathweni kwezinqumo nokwenziwa kwenqubomgomo.